SIM Card တွေအစား eSIM တွေဖြစ်လာတော့မှာလား?
22 Feb 2018 . 5:27 PM
အလွန်သေးငယ်တဲ့ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အရွယ်အစားတစ်ခုထဲမှာထည့်သွင်းတည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် မလိုအပ်ပဲနေရာပုတ်နေတယ်လို့ ယူဆရတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကို ဖြုတ်ပစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ သတ်မှတ်ချက်ဟာ စမတ်ဖုန်းတွေမှာလည်း တူညီပြီး ယခင်ထဲကစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာ SIM Card တွေကို Mini SIM ၊ MicroSIM ၊ Nano SIM စသဖြင့် တဖြည်းဖြည်းအရွယ်အစားကိုလျော့ချပြီး ဒီ စမတ်ဖုန်းကိုယ်ထည်ထဲမှာ အခြားသော Processor နဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ပိုပြီးထည့်လာနိုင်အောင်ပြုလုပ်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ Chip Design Company ဖြစ်တဲ့ ARM ကနေ Processor Chip အတင်းမှာ SIM ကိုထည့်သွင်းထားနိုင်တဲ့ iSIM လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ နည်းပညာကို ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။
ARM ကတော့ အခု iSIM နည်းပညာဟာ စတုရန်း တစ်မီလီမီတာပဲရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လက်ရှိအချိန်မှာ အသေးဆုံးသော SIM Card ဖြစ်တဲ့ Nano SIM ရဲ့ 12.3 × 8.8mm Size နဲ့ ယှဉ်မယ်ဆိုရင် သိသိသာသာကို သေးငယ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ARM ရဲ့ ပြောကြားချက်အရတော့ အရွယ်အစားသာလျော့လျပေးနိုင်တာတင်မဟုတ်ပဲ ဖုန်းထုတ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း ပြားဂဏန်းပဲ ကျန်ကျမှာဖြစ်ပြီး ယခင်ထက် ၁၀ ပုံ တစ်ပုံလောက်ကို လျော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုလိုမျိုး နည်းပညာတွေဟာ အလွန်ကို ကောင်းမွန်တယ်ဆိုပေမယ့် အခုချက်ချင်းတော့ SIM Card တွေက ပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ အခုနည်းပညာဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ အသေးစားအင်တာနက်ကို ချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေအတွက် ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီး နောက်နှစ်တွေထဲမှာမှသာ အခြားသောဈေးကွက်အကြီးစားတွေကို ဝင်ရောက်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နောက်တချက်အနေနဲ့ ARM လိုမျိုး Chip Maker ကုမ္ပဏီကြီးတွေက iSIM လိုမျိုး Processor မှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ SIM နည်းပညာတွေကို တီထွင်လာတယ်ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်း ဈေးကွက်ထဲတွင်ကျယ်လာဖို့ကတော့ ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာတွေရဲ့ ပူးပေါင်းမှုလည်း လိုအပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလိုမျိုး iSIM လိုမျိုး Electronic SIM တွေကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့ကတော့ လိုအပ်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Akhayar- Tech ပရိသတ်ကြီးရော အခုလို Processor ထဲမှာ တပါတည်းပါဝင်လာမယ့် SIM နည်းပညာကိုရောဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ?
အလှနျသေးငယျတဲ့ အီလကျထရောနဈပစ်စညျးတှကေို သတျမှတျထားတဲ့အရှယျအစားတဈခုထဲမှာထညျ့သှငျးတညျဆောကျတော့မယျဆိုရငျ မလိုအပျပဲနရောပုတျနတေယျလို့ ယူဆရတဲ့အရာတှအေကုနျလုံးကို ဖွုတျပဈရမှာဖွဈပါတယျ။
အဆိုပါ သတျမှတျခကျြဟာ စမတျဖုနျးတှမှောလညျး တူညီပွီး ယခငျထဲကစမတျဖုနျးထုတျလုပျသူတှဟော SIM Card တှကေို Mini SIM ၊ MicroSIM ၊ Nano SIM စသဖွငျ့ တဖွညျးဖွညျးအရှယျအစားကိုလြော့ခပြွီး ဒီ စမတျဖုနျးကိုယျထညျထဲမှာ အခွားသော Processor နဲ့ အစိတျအပိုငျးတှကေို ပိုပွီးထညျ့လာနိုငျအောငျပွုလုပျလာကွတာပဲဖွဈပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာတော့ Chip Design Company ဖွဈတဲ့ ARM ကနေ Processor Chip အတငျးမှာ SIM ကိုထညျ့သှငျးထားနိုငျတဲ့ iSIM လို့ နာမညျပေးထားတဲ့ နညျးပညာကို ထုတျပွလိုကျပါတယျ။
ARM ကတော့ အခု iSIM နညျးပညာဟာ စတုရနျး တဈမီလီမီတာပဲရှိမှာဖွဈတဲ့အတှကျ လကျရှိအခြိနျမှာ အသေးဆုံးသော SIM Card ဖွဈတဲ့ Nano SIM ရဲ့ 12.3 × 8.8mm Size နဲ့ ယှဉျမယျဆိုရငျ သိသိသာသာကို သေးငယျသှားတာဖွဈပါတယျ။ ARM ရဲ့ ပွောကွားခကျြအရတော့ အရှယျအစားသာလြော့လပြေးနိုငျတာတငျမဟုတျပဲ ဖုနျးထုတျတဲ့သူတှအေတှကျလညျး ပွားဂဏနျးပဲ ကနျြကမြှာဖွဈပွီး ယခငျထကျ ၁၀ ပုံ တဈပုံလောကျကို လြော့ခပြေးနိုငျမှာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
အခုလိုမြိုး နညျးပညာတှဟော အလှနျကို ကောငျးမှနျတယျဆိုပမေယျ့ အခုခကျြခငျြးတော့ SIM Card တှကေ ပြောကျကှယျသှားမှာမဟုတျသေးပါဘူး။ အခုနညျးပညာဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ အသေးစားအငျတာနကျကို ခြိတျဆကျပွီးအသုံးပွုနိုငျတဲ့အရာဝတ်ထုတှအေတှကျ ရညျရှယျတာဖွဈပွီး နောကျနှဈတှထေဲမှာမှသာ အခွားသောဈေးကှကျအကွီးစားတှကေို ဝငျရောကျဖို့ ရညျရှယျထားတယျလို့ သိရပါတယျ။
နောကျတခကျြအနနေဲ့ ARM လိုမြိုး Chip Maker ကုမ်ပဏီကွီးတှကေ iSIM လိုမြိုး Processor မှာ ထညျ့သှငျးထားတဲ့ SIM နညျးပညာတှကေို တီထှငျလာတယျဆိုပမေယျ့ တကယျတမျး ဈေးကှကျထဲတှငျကယျြလာဖို့ကတော့ ဆကျသှယျရေးအျောပရတောတှရေဲ့ ပူးပေါငျးမှုလညျး လိုအပျမှာဖွဈတဲ့အတှကျ အခုလိုမြိုး iSIM လိုမြိုး Electronic SIM တှကေို အသုံးပွုနိုငျဖို့ကတော့ လိုအပျဦးမှာဖွဈပါတယျ။
Akhayar- Tech ပရိသတျကွီးရော အခုလို Processor ထဲမှာ တပါတညျးပါဝငျလာမယျ့ SIM နညျးပညာကိုရောဘယျလိုသဘောရပါသလဲ?